Soo dejisan GameMaker 1.4.1657 – Vessoft
Soo dejisan GameMaker
GameMaker – software ah si ay u abuuraan kulan nidaam hawlgalka kala duwan. Software waxuu si ay u abuuraan kulan ee hadalyo kala duwan ee 2D ama meel 3D leh awood uu ku caddee isku xigxiga oo ka mid ah falalka la dhaba in waqtiga iyo wadada dhaqdhaqaaqa. GameMaker kuu ogolaanayaa inaad bedesho gunta ciyaarta, Customize muuqaallo kale oo ku dari muusig ama codad kala duwan. Software ka kooban yahay luqad barnaamijyada dhisay-in kulamadan oo horumarsan iyo functional. Sidoo kale GameMaker u saamaxaaya in ay kordhiso software isticmaalaya xidhiidhka ka mid ah lagu daro kala duwan.
Waxay abuurtaa kulan ee hadalyo kala duwan
Set A ee saamaynta graphic iyo dhawaaqa
Qorshaha dhaqdhaqaaqa walxaha
Waxaa la dhisay-in luqadda programming
Comments on GameMaker:
GameMaker Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Unity 5.4.0
IntelliJ IDEA 14.1.4 build 141.1532.4 Ultimate iyo Community
Horumarinta Jawiga horumarinta caqli of software waxaa diiradda lagu saaray waxqabadka iyo ka-fiirsashada of sameeysa a on hawlaha ka muhiimsan.
Horumarinta Tafatirka Text editor The functional in ay la shaqeeyaan code. software wuxuu ka kooban yahay dhowr ah qaababka awood iyo awood u leh inay geliyaan faylasha maxalliga ah si a FTP-server.
Horumarinta Tafatirka Text editor text awood la set oo ah qaababka ugu leh shuqulka soo saar badan leh files qoraalka. software The waa inay awoodaan inay si weyn u dardar shaqada la files qoraalka.
Horumarinta deegaanka ayaa habboon in la horumariyo daro iyo software. software The taageera luqadaha barnaamijyada ugu iyo intii maxal fursadaha ballaaran ee horumarka cusub ee wax soo saarka.
Horumarinta Ku haboon qalab si ay u abuuraan oo ka soo dejisan bogagga web oo aan ogayn HTML. Software ka kooban yahay tafatiraha iyo set ka mid ah foom oo aad loogu diyaariyey shuqul fududeeyey walxaha.
Midori 0.5.11 Stable iyo Portable
Games The madal kulanka caanka ah ula tiro badan oo ka mid ah kulan ee caanka ah ee qaybaha kala duwan. software The u saamaxaaya in ay xiriiro iyo ciyaartoyda kale iyada oo loo marayo internet-ka ciyaaro.
Horumarinta Software in ay ku xidhmaan server fog ama computer iyada oo loo marayo hab maamuuska kala duwan. Sidoo kale ee software-ka waxaa jira korontada si ay furayaasha SSH iyo sugida.
Streaming video Software ayaa si aad u eegto warbaahinta video internetka. Sidoo kale software awood u tahay in la abuuro aad channel u gaar ah si ay u gudbiyaan video ee shabakadda.
English, Français, Español, Deutsch... LibreOffice 5.2.2 iyo 5.2.3 beta 1
Virtual DJ 8.2.3456 iyo 7.4.7